🌟Iziqulathe ngokwazo kwindlwana yabantu basezilalini🌟 - I-Airbnb
🌟Iziqulathe ngokwazo kwindlwana yabantu basezilalini🌟
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAlison And Simon
UAlison And Simon yi-Superhost
Indlu enamagumbi okulala amabini anoxolo kumda we-Trough ye-Bowland kunye ne-Lune Valley enxibelelana neYorkshire Dales (Hawes - 30mins) kunye neSithili seLake (Windermere - 45 mins), kunye nedolophu edumileyo yaseKirkby Lonsdale umgama nje wemizuzu engama-20. !
Ukuhamba okugqwesileyo kunye neendlela zokujikeleza kule ndawo, ubutyebi bezilwanyana zasendle ezijikeleze, iigusha ezinomdla ezifika ecingweni kunye nemibono ejonge eMorecambe Bay kunye neLakeland Fells. Zininzi iindawo zokutyela ezimangalisayo ezikufutshane.
Imizuzu engama-20 ukusuka kuM6 Junction 34.
I-Swallow Cottage yindlu enamagumbi amabini okulala abucala, eqhayisa ngoqhagamshelo lwe-intanethi olukhawulezayo kwihlabathi. Indawo yokutyela ekhitshini ineoveni, ihob, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba kunye nefriji yefriji. Hlala ujikeleze itafile kwaye ucwangcise usuku lwakho ngezinto ezininzi ezikufutshane.
Igumbi lokuphumla libonelela ngezihlalo ezitofotofo kunye neefestile ezinkulu kunye neengcango zepatio ezivuleleka kwipatio enendawo yokuhlala yangaphandle kunye neembono ezithandekayo zamasimi aluhlaza. I-TV eneNetflix kunye nomlilo wombane zilungile kubusuku obupholileyo emva kosuku olusebenzayo lokuphonononga iiwa, amachibi okanye ukuthenga kwiidolophu zentengiso zasekhaya.
Igumbi lokulala eliphindwe kabini liza ne-ensuite eneshawa, iTV kunye nezibane ezisecaleni kwebhedi. Eli gumbi linefestile ye-velux ukuze ukwazi ukujonga iinkwenkwezi ebusuku ukuba uyafuna.
Igumbi lokulala elinamawele lineensuite enebhafu / ishawari, iTV kunye nezibane ezisecaleni kwebhedi.
Indawo yokupaka iyafumaneka kwiimoto ezimbini.
ITatham yindawo ezolileyo yasemaphandleni, enamabala aluhlaza kunye nokugcwala okuncinci. I-Bridge Inn, indawo yokushicilela yelizwe epholileyo kukuhamba okufutshane kwindlela enesango (thatha itotshi ebusuku), kwaye ilali yase-Wray ikumgama omalunga nekhilomitha enesiqingatha, inevenkile yasekhaya / iposi, iziko legadi kunye neFama yaseBridge House. Igumbi leti elithengisa amaqebengwana amnandi, kunye neGeorge kunye neDragon pub ebonelela ngezidlo ezithandekayo kunye noluhlu olubanzi lwesiselo.
Umbuki zindwendwe ngu- Alison And Simon
Sihlala kufuphi nepropathi ngoko siya kufumaneka ixesha elininzi, nangona kunjalo siyaqhagamshelwa ngefowuni okanye nge-imeyile.
Ukungenwa koqhagamshelwano ngetshekhi kunye nezitshixo ezishiywe kwisefu yesitshixo kunye nekhowudi ethunyelwe kuwe nge-imeyile.
Ukungenwa koqhagamshelwano ngetshekhi ku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tatham